HomeWararka CiyaarahaLiverpool oo ka mid ah kooxaha ugu cad cad ee heshiiska Denis Zakaria
January 22, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay aad ugu dhowdahay saxiixa xiddiga Borussia Monchengladbach ee Denis Zakaria bishaan.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa galay lixdii bilood ee ugu dambeysay qandaraaskiisa Monchengladbach, mana saxiixi doono heshiis kordhin uu ku joogo Borussia-Park.
Manchester United ayaa si xoogan loola xiriirinayay 25 jirkaan, kaasoo laga yaabo in lagu heli karo qiimo dhimis ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay ESPN , Liverpool ayaa hogaamineysa xiisaha Premier League ee xiddiga heerka caalami ee dalka Switzerland, waxaana dhab’ ka yihiin saxiixiisa ka hor dhamaadka bishaan.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Bayern Munich iyo Borussia Dortmund ay sidoo kale si adag ugu jiraan loolanka loogu jiro saxiixa Zakaria inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga ee Janaayo, iyadoo Man United ay u badan tahay inay u dhaqaaqdo saxiixiisa.
Ciyaaryahanka khadka dhexe, oo sidoo kale la rumeysan yahay inuu xiiseynayo Juventus , ayaa dhaliyay 11 gool, waxaana loo diiwaan geliyay sideed caawin 145 kulan oo uu u saftay Monchengladbach tan iyo markii uu ka yimid Young Boys 2017.